Uyifaka njani iLinux Mint kwi-USB: yonke into ekufuneka uyazi | Ubunlog
Uyifaka njani iLinux Mint kwi-USB: yonke into ekufuneka uyazi
UPablo Aparicio | | Ulwabiwo olusekwe kubuntu, Tutorials, Ubuntu
Ukuba kuthelekiso lwethu I-Linux Mint vs Ubuntu Ekugqibeleni ukhethe i-Linux Mint, emva koko siza kukubonisa indlela yokufaka kwi-USB.
Nangona ukufumana ukuhanjiswa kweLinux esikuthandayo ayisiyonto ilula, abasebenzisi abaninzi bayayeka ukujonga xa bezama Linux mint. Ngapha koko, uninzi lwabasebenzisi abaphambili baphakamisa ukuba abo bangazange bazame iLinux baqale ukusebenzisa le nkqubo ithandwayo yokusebenza kuka-Ubuntu. Ukuba ungomnye waba basebenzisi, kule posi ucacisile Njani? faka Ubuntu kwi-USB nayo yonke into ofuna ukuyifumana malunga neLinux Mint.
1 I-Linux Mint iyafumaneka kwiinguqulelo ezi-4
2 Iimfuno zenkqubo yeLinux Mint
3 Amanyathelo ekufuneka elandelwe ukufaka iLinux Mint kwi-USB
I-Linux Mint iyafumaneka kwiinguqulelo ezi-4
ICinnamon yindawo yemizobo yeLinux Mint kwaye iyi Ifom ukusuka kwi-GNOME.
Kuyinto entle kwaye iyasebenza.
UMATE ngomnye Ifom ye-GNOME kwaye inomfanekiso ngqo kulowo wasetyenziswa ngu-Ubuntu de kwafika ubunye.
Ikhaphukhaphu, okanye kufanele ukuba xa usebenzisa imeko yemizobo eyashiywa ngu-Ubuntu ngo-2010.
Ngokukodwa kufanelekile kwabo bakhetha imeko yemizobo yeklasikhi.
I-Xfce ikhaphukhaphu kuneMATE. Kwi Linux Mint intle kakhulu.
Olona khetho lulungileyo kwiiPCs ezinesixhobo esisezantsi.
I-KDE yenye yezona ndawo zigqibeleleyo zemizobo.
Inika ukhetho oluninzi kwaye inomfanekiso okhangayo.
Ifanele ngakumbi iikhompyuter zale mihla. Ngokwam, ndingathi ndiyayithanda i-KDE, kodwa andihlali ndiyisebenzisa kwiLaptop yam kuba ndihlala ndibona uninzi lwezaziso ze-bug kunokuba ndingathanda ukuzibona.
Iimfuno zenkqubo yeLinux Mint
I-512MB ye-RAM. I-1GB iyacetyiswa ukuba isetyenziswe ngokutyibilikayo.
I-9GB ye-RAM. I-20GB iyacetyiswa ukuba ufuna ukugcina iifayile.
Isigqibo 1024 × 768.
Inguqulelo engama-64-bit inokusebenza kwimowudi ye-BIOS okanye ye-UEFI, ngelixa uguqulelo lwe-32-bit luya kuqala kuphela kwimowudi yeBIOS.
Amanyathelo ekufuneka elandelwe ukufaka iLinux Mint kwi-USB
Makhe siye kwi iwebhusayithi esemthethweni Khuphela umfanekiso we-ISO wenkqubo yokusebenza. Sinokukhetha phakathi kokukhuphela ngokuthe ngqo kwiwebhu okanye ukusebenzisa umxhasi ukukhuphela iifayile ezikhukula. Ngokwam, ndikufumanisa kulula ukuyenza usebenzisa enye yezona zininzi izibuko ezinikezelwa yiwebhu. Into endihlala ndiyenza kukuzama ukukhuphela ngokuthe ngqo kwiwebhu kwaye, ukuba ndiyabona ukuba kuya kuthatha ixesha elide, ndiyikhuphele kwaye ndiyikhuphele ngeTransmission.
Emva koko kufuneka senze i-USB eqalekayo. Kukho izixhobo ezininzi ezikhoyo kuyo nayiphi na inkqubo yokusebenza, kodwa ndincoma ukusebenzisa i-UNetbootin kuba isimahla kwaye iyafumaneka kwiLinux, Mac nakwiWindows. Ukongeza, ukusetyenziswa kwayo kulula kakhulu:
Ukuba asiyifaki, siyifaka. Kwi-Linux singayenza sisebenzisa lo myalelo "sudo apt ukufaka unetbootin" ngaphandle kwezicatshulwa. KwiMac kunye neWindows sinokuzikhuphela kuyo LONTO.
Sijonge umfanekiso we-ISO esiwukhupheleyo kwinyathelo loku-1 ngokunqakraza kumachaphaza ama-3 (…).
Sikhetha ukuqhuba apho i-bootable USB iya kwenziwa khona. Kuyacetyiswa ukuba uqiniseke ukuba senze ukhuphelo lwedatha ebalulekileyo ekule USB.
Sinqakraza KULUNGILE kwaye silinde inkqubo igqibe.
Siqala kwi-USB esiyenzileyo.
Ngoku kufuneka sifake iLinux Mint njengoko besinokwenza nayiphi na enye indlela yokusebenza esekwe kubuntu:
Kwinyathelo lokuqala, ndingacebisa ukunxibelelana nePC kwindawo yokuphuma yombane nakwi-Intanethi, nokuba ngentambo okanye iWi-Fi.
Sinqakraza kabini kwi icon ethi «Faka iLinux Mint».
Sikhetha ulwimi kwaye ucofe ku «Qhubeka».
Kwiskrini esilandelayo sinokukhetha ukuba sifuna ukufaka isoftware yomntu wesithathu njengeflash, iMP3, njl. Ndihlala ndiyifaka. Sikhetha ukuba siyafuna okanye hayi kwaye ucofe ku «Qhubeka».
Kwinyathelo elilandelayo siza kukhetha indlela esifuna ukufaka ngayo. Kuzo zonke iinketho, ndingagqamisa ezintathu:
Faka inkqubo ecaleni kwenye (i-dualboot).
Cima yonke idiski kwaye ufake iLinux Mint kwi-0.
Okungakumbi, apho sinokwenza khona izahlulelo ezinjengeengcambu, ezakho kunye nokutshintsha. Olu lukhetho endihlala ndilukhetha.
Nje ukuba ukhetho olukhethiweyo lukhethwe, sicofa u "Faka ngoku" okanye "Qhubeka" kwaye samkele isaziso esisibonisayo.
Ngoku ufakelo luza kuqala ngokwenyani. Kwinyathelo lokuqala, sikhetha indawo yethu yexesha kwaye ucofe u "Qhubeka".
Sikhetha ubeko lwebhodi yezitshixo. KwiSpanish yaseSpain kufuneka sikhethe kuphela "iSpanish", kodwa sinokuqinisekisa ukuba sicofa kwi «Fumana ubeko lwebhodi yezitshixo», eya kuthi isibuze ukuba sicinezele amaqhosha athile kwaye siyimise ngokuzenzekelayo. Kuya kufuneka ndiyivume loo nto, nangona sendisele ndiyazi ukuba kuza kwenzeka ntoni ngayo, ndiziva ndizolile ukuba ifunyenwe ngokuzenzekelayo ngolu khetho.
Cofa ku «Qhubeka».
Senza iakhawunti yethu yomsebenzisi. Kufuneka singene:
Ngenisa igama lokugqithisa.
Ngoku kufuneka silinde ukufakelwa ukuba kwenzeke. Xa inkqubo igqityiwe, cofa kwindawo ethi "Qala kabusha ngoku" kwaye siya kungena kwiLinux Mint.
Ngaba unayo nayiphi na imibuzo malunga nendlela yokufaka iLinux Mint kwi-USB?
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ubunlog » Ubuntu » Tutorials » Uyifaka njani iLinux Mint kwi-USB: yonke into ekufuneka uyazi
UZdenko janov sitsho
I-Mint indala ukusukela ngoku 🙂
Phendula uZdenko Janov
Enkosi ngokuchaza ngokweenkcukacha… Kwaye nesicelo…. Njengakwirediyo ... Uyifaka njani iLibya ... Kwi-USB. Ndithetha ukusebenzisa i-USB. Njenge-hard drive njengenkqubo. Ukuba ugcine kungekuphela nje njengesiqalo esingxamisekileyo. Nendlela yokwenza. Enkosi
Molo, grego. Ndifuna ukuyenza ixesha elide kwaye ndiye ndangena kwiingxaki ezininzi:
I-1- Eyona nto ilula kukusebenzisa isixhobo esinjengeLiLi USB Creator (windows) ekuvumela ukuba wenze i-USB eqhubekayo eBootable. Oku kuthetha ukuba iya kuba nakho ukuqala kwi-USB kwaye iya kugcina utshintsho, kodwa ifaka kuphela kwi-FAT32, oko kuthetha ukuba ifolda / yasekhaya inokuba yi-4GB kuphela. Kwakhona, ukuba ndikhumbula ngokuchanekileyo, le nkqubo ayixhasi i-UEFI boot.
I-2- Ingafakwa kwi-USB ngokukhetha i-pendrive njengendawo yokuya kuyo, kodwa iya kususa isahlulelo kwi-pendrive kwaye ukufakwa kwediski enzima akuyi kuqala. Isisombululo esingakhange ndizame kukuba, kwelinye lamaxesha amaninzi apho ndenza khona utshintsho kwinkqubo, ndisebenzise kwaye ndenze i-USB yolu hlobo. Into embi kukuba, ukuba andiphazami, i-USB iya kuhambelana kuphela nekhompyuter apho siyila khona kwaye, mhlawumbi, xa siyisebenzisa, into iya kulayishwa.
3- Kukho olunye ukhetho kwakhona lweWindows ukuba okwangoku andikhumbuli ukuba le nkqubo ibizwa ntoni. Ewe ndiyazi ukuba ngale nkqubo ungaqhuba i-USB kwiikhompyuter nge-BIOS kunye ne-UEFI yokuqalisa, kodwa ubukhulu becala sasinefolda ye-6GB / yasekhaya. Mhlawumbi ndinenkqubo efakiweyo kwizahlulelo sam seWindows, kodwa kuba andizange ndingene ... andazi ngenene. Ukuba ndiyakhumbula, ndiza kujonga kwaye ndikuxelele ukuba yintoni.
URamon Fontanive sitsho
Inkcazo egqwesileyo, i-didactic kwaye ilula, ndiqala ngenkqubo yokusebenza yeLinux. Enkosi,,
Phendula kuRamón Fontanive
Ndiyacela!!!! Ndenze yonke into kwileta. Kodwa andina disk yokufaka i-Linux eseleyo kwi-pendrive !! Unayo njani kwidesktop emfanekisweni? Ndandinayo yonke le mini. Ndiyaluxabisa uncedo. Ndiyabulisa!
Hlela icandelo leemfuno.
«9GB ye-RAM. I-20GB iyacetyiswa ukuba ufuna ukugcina iifayile. »
Ndicinga ukuba ubuthetha i-hard drive.
Luch @ CK sitsho
Ndisandula ukufaka i-Linux okokuqala kwi-pc yam kwaye, ngokulandela amanyathelo akho kwileta, ndiyenzile ngaphandle kwengxaki.
Phendula kuLuch @ CK
Xa ufaka i-linux, inkqubo yokusebenza kweewindows icinyiwe kwaye kuhlala i-linux kuphela? okanye kufana nokwenza isahlulelo?
Emva kokufaka i-LM18.2 KDE ngokungagqibekanga kwidiski ye-3TB, indawo ekuhlalwa kuyo yayiyi-1MB yokuqalisa kunye ne-8GB ye-SWAP kunye ne-145GB ye / ebonakala ngathi kukuzibaxa.
Sele ndikwifomathi yenqanaba eliphantsi kufakelo olucocekileyo nokwahlulahlula ngesandla.
Kukhona into engalunganga sitsho
Ndenza inkqubo yefayile ye-ext5 ye / boot kwisahlulelo # 2 ukusuka kufakelo lwe-usb malunga neentsuku ezintlanu. Ngaba kuyinto eqhelekileyo? Nasiphi na isisombululo?
Enkosi kumsebenzisi omtsha weLinux Mint
UMario Anaya sitsho
Molo: Ndifuna ukufaka i-linux Mint amaxesha ama-4 kwaye kuyo yonke ndinengxaki.
Amaxesha amabini okugqibela emva kokufaka zonke iipakeji ndaphosa impazamo xa kwakufakwa i-GRUB2 kwaye ufakelo lwalungalunganga kwaye lwalungenakusebenziseka.
Amanye amaxesha amabini ndiphose impazamo eyathethayo malunga ne-UEFI, andazi ukuba yintoni.
Ndicacisa ukuba ndenze ufakelo olucocekileyo kwaye ndacela ukuba icinywe yonke idiski kwaye ufakelo luya kwenza izahlulelo ezihambelana nazo ngokuzenzekelayo.
Andazi ukuba kwenzeka ntoni
Ngoku ndisebenzisa iLinux Ubuntu 1804, kodwa ndingathanda ukuzama iLinux Mint
Phendula uMario Anaya
Molo, unjani? Ndinombuzo, ingaba i-usb ingasetyenziswa kangakanani? Inokuba ngubani na okanye kufuneka ibengu-4GB, 8GB, njl.
phantse ngalo lonke ixesha kwi-linux
Ku-Ubuntu phantse akunakwenzeka ukufaka i-unebootin
Inkqubo yemultisy ayisebenzi
Mhlawumbi ubuntu buya kuzicwangcisa ezi nkqubo zincinci ukuze ungazilahli, kwisitayile esicocekileyo seewindows
Inyani yile yokuba emva kweeyure ezimbalwa ujikeleza kuGoogle, ndiyondla kwaye ndithumela yonke into kwi-M
Ubuncinci kuyenzeka kum rhoqo ngale M yeLinux
Kodwa kuba andifuni ukusebenzisa iifestile, kuya kufuneka ndibambe ndide ndibenemali ndithenge iMac
federico gonsalez sitsho
Molo, mvakwemini entle kakhulu, ndizamile ukufakela izixhobo ze-linux kodwa zikwi-4 GB ye-USB kwaye ekuqaleni yonke into ilungile, enyanisweni, ndothuka kuba khange ihlale nokuma, ibingumbandela nje Amaxesha ambalwa ndivale ikhompyuter ngokupheleleyo kwaye ngoku icothe kakhulu.
Ngaba umntu unokundixelela okwenzekileyo okanye andinike ithuba lokulungisa le nkcukacha. imveliso ilungile kwaye kulula ukuyisebenzisa, ungandinceda.
Ngombulelo wakho enkosi
Phendula ku-federico gonsalez
Ewe, ufakelo luthatha iintsuku ezimbini ukwenza iifayile ze-ext4, kubonakala ngathi isasebenza, kodwa seziintsuku ezimbini ……………………………….
UJaime Reus sitsho
Kulungile, iya kubanda ngexesha lofakelo (uguqulelo lwe-19.3 XFCE). Ikhuphela iifayile, kwaye xa ifikelela kwifayile engama-239 (ngaphandle kwama-239), iba ngumkhenkce kangangemizuzu eliqela. Ndine-PC ene-16 GB ye-DDR4 RAM kunye nediski ye-M2.SSD, kwibhodi ye-Asus TUF B360M-PLUS GAMING kunye neprosesa ye-Intel 5. Andazi ukuba isihogo kufanele ukuba kwenzeke ntoni kuso.
Phendula kuJaime Reus
U-Eliomin zelaya sitsho
Ndenza yonke into ukuyifaka kwaye ihlala ime xa isithi wamkelekile, kwaye ayisuki apho
Phendula uEliomin Zelaya
Molo, enkosi ngamanyathelo okufaka, asebenze ngokugqibeleleyo kum !!
Bhala! usetyenziso oluncinci lwababhali abasebenzisa Ubuntu
Rambox, yonke imiyalezo yakho kwisicelo esinye